Odayaasha iyo Dhallinyarada beelaha Banaadiriga oo dhaliilay xubnaha ugu jira Dowladda, baaqna u jeediyay madaxda sare + Sawirro
Kulan ay maanta isugu yimaadeen waxgaradka, odayaasha, dhallinyarada, Culumaa'udiinka iyo dhallinyarada beelaha Banaadiriga kana dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaaladda wadanka iyo doorka beesha uga aadan taageerada Dowladda Soomaaliya iyo arrimo kale oo ku saabsan xubnaha beelahaasi u matalaya Xukuumadda cusub ee dhowaan dalka ka dhalatay.
Guddoomiyaha Midowga Dhallinyarada beelaha Banaadiriga Md. Cumar Shariif Jeeg, Guddoomiyaha xalinta Khilaafaadka beelaha Banaadiriga Caaqil Dheere Shiiqeey Maxamed, Malaaqa Beelaha Banaadiriga Malaaq Maxamed smaaciil, nabadoon Xasan Bilaal Maye iyo xubno kale ayaa ka qeyb galay kulankaasi oo diiradda lagu saaray arrimo fara badan.
Md. Cumar Shariif Jeeg Guddoomiyaha Midowga Dhallinyarada beelaha Banaadiriga oo ugu horeyn kulankaasi ka jeediyay khudbadda furitaanka ayaa dhaleeceyn ba'an dusha uga tuuray xubnaha beelahaasi ugu jira Dowladda oo uu sheegay inaysan matalin beelaha Banaadiriga, isagoo ku eedeeyay in lixda xubnood ee beelaha Banaadiriga ugu jira Dowladda ay yihiin shaqsiyaad ka weecday danta guud isla markaana danahooda oo kaliya eeganaya.
"Saddexda mas'uul ee ugu sareysa Dowladda Soomaaliya waxaan ogeysiineynaa isla markaana ugu baaqeynaa inaysan wakiil ka ahayn beelaha Banaadiriga xubnaha aan heysan kalsoonida beelaha ay ka soo jeedaan" ayuu yiri Guddoomiyaha Midowga Dhallinyarada beelaha Banaadiriga oo sheegay in madaxda sare ee Dowladda ay la soo xiriiraan gogosha waxgaradka iyo odayaasha beelaha Banaadiriga isla markaana u soo diraan guddi arrimahaasi soo baara.
Waxaa kale oo uu sheegay Md. Cumar Shariif Jeeg in xubnaha beelaha Banaadiriga ugu jira Dowladda aanay heysan kalsoonida beesha, isla markaana ay yihiin xubno maroorsaday amaba si qiyaano ah uga mid noqday Dowladda, wuxuuna caddeeyay in kulankani maanta ay yeesheen uu la xiriiro kaddib markii uu soo gaaray warar degdeg ah oo ku saabsan in xubnahaasi ay kulan la yeelanayaan saddexda mas'uul iyagoo ku andacoonaya in kuraasta beelaha Banaadiriga ay iyagu qaadaan.
"Nama matalaan xubnaha Dowladda ku jira ee ku qaraabanaya magaca beelaha Banaadiriga, haddii ay dhacdo in xubnahaasi warkooda la yeelo anagana sidii Gaza oo kale waan mudaaharaadeynaa anagoo ku dagaalameyna dhallooyin batrool lagu shubay" ayuu yiri Cumar Shariif Jeeg.
Isagoo ka hadlayay Guddoomiyaha Midowga Dhallinyarada beelaha Banaadiriga tallaabada xigta ee ay qaadayaan, waxa uu ka codsaday Dowladda inay u ogolaadaan inay bannaanbaxyo ku sameeyaan xubnahaasi qiyaanay beelaha Banaadiriga ah isla markaana ay ku celcelinayaan inaysan marnaba matalin iyaga.
"Madaxda sare ee Dowladda waxaan ugu baaqeynaa in xubnaha beelaha Banaadiriga ay ku leeyihiin, Wasiir K/Xigeenada, Safiirada, Wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee Dowladda aanay kala tashan karin ragga magaca beesha ku qaraabanaya, waana inay Dowladdu kala tashato guddiga odayaasha dhaqanka beelaha Banaadiriga ah" ayuu mar kale yiri Cumar Shariif Jeeg Guddoomiyaha Midowga dhallinyarada beelaha Banaadiriga.
Dhinaca kale waxaa halkaasi khudbad kooban oo qiimo leh ka jeediyay Caaqil Dheere Shiiqeey Maxamed Guddiga guddiga xalinta khilaafaadka beelaha Banaadiriga ayaa sheegay inay yihiin beelo nabadeed, isla markaana Dowladda cusub ay taageersan yihiin mar haddii ay meesha ka saartay nidaamkii 4.5 oo in muddo ah lagu soo hayay beelahaasi.
"Anagoo maanta ku naalooneyna cadaaladda lagu soo dhisay Dowladda oo barkii meesha ka saartay waxna ku qeybisay shan beelood oo siman, waxaa nasiib darro noqotay in shaqsiyaad ka mid ah beelaha Banaadiriga ah ay sameeyeen takri fal iyo iska warqab la'aan, waana kuwo dhuunta wax ka arka oo aan indhahaba wax ka arkin" ayuu yiri Caaqil Dheere Shiiqeey.
Ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay Malaaq Maxamed Ismaaciil Axmed iyo Xasan Bilaal Maye oo ku booriyay xubnaha beelaha Banaadiriga magacooda ku qaraabanaya inay arrintaasi ka waantoobaan isla markaana ay la xiriiraan waxgaradka, odayaasha iyo bulshada beelaha Banaadiriga gogosha ay leeyihiin.